वर्तमान सरकार, सिके रावत र लासको राजनीति
राष्ट्रभक्ति एकताको जरुरी
प्रकासित मिति : २०७५ फाल्गुन २६, आईतवार १९:२७ प्रकासित समय : १९:२७
तिन करोड नेपाली जनतालाई र बिश्वब्यापी सर्बग्यान छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र स्वाभिमान अखण्ड राष्ट्र हो । केपि वलि प्रचण्डले अर्थ्याइ रहनुपर्दैन नेपाल के हो ? नेपाल प्राकृतिक रूपमा तिनभागमा अबस्थित छ । हिमाल , पहाड र तराई यसैलाइ भनिन्छ । सिङ्गो अखण्ड स्वतन्त्र नेपाल नेपाल बर्तमान सरकार चलाउने कथित कम्युनिस्ट नाम भजायर उग्रतानसाहिका मतियारहरुका नजिक घुम्नेहरुले जुन नेपाली जनताको भावनालाई इमोस्नल अप ब्याख्या गरेर सत्तामा पुगेकाहरुले चाहेको नेपाल हुन सक्दैन ।
नेपाल जस्तो छ त्यसतै रहिरहन्छ । त्यसमा दायाँबायाँ गर्न खोज्नेहरुको बाउको न त बक्यौता हो । न त तिमीहरूकी आमाको दाइजो हो । यो कुनै अमेरिकी चाख परिपुर्ति गर्ने नेपाल र नेपालीमाथी बिष बेदन गर्ने सिके रावत र केपि प्रचण्डले चाँहादैमा परिवर्तन हुने राष्ट्र नेपाल होइन ।
कुनैपनी राजनीति शक्ति समूहले शान्तिपुर्ण राजनीति मुलधारमा आउनुलाई स्वागत योग्य मान्नुपर्छ । तर हरेकले देशको राष्ट्रिय अखण्डता स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथी कुनै किसिमको आँच आउने सम्झौता काम कारबाहीमा भने सम्झौता हुन सक्दैन । त्यस्को डटेर प्रतिरोध गर्न जरुरी छ । त्यसैले भर्खरै नेपाल सरकार र पृथक्ताबादी समुहका नाइके सिके रावत बीचमा भएको ११ बुदे सम्झौताको बारेमा सटिक ब्याख्या गर्न चहान्छु। पहिलोकुरात सिके रावत को हुन र उनले प्रतिपादन गरेको सिधाान्त के हो ? भन्नेबारे बुझ्न जरुरी छ।
सिके रावत को हुन ?
खासगरी अमेरिकी जासुसी नै सिके रावत हुन । सिके रावत को हुन भनेर सामान्य नागरिकलाई सोध्दापनी डेढ्दसक अमेरिका बसेर एउटा पृथक्ताबादी सोच बोकेर नेपाल फर्केका ब्यक्ती हुन भन्नेकुरा थाहा छ । उनी पश्चिमी मुलुकहरूबाट संचालित देशद्रोही हुन भन्न कसैले पनी कन्जुस्याइँ गर्दैन । सिके रावतले जतिपनी पृथक्ताबादी सामाग्री निर्माण बितरण प्रचारप्रसार गरेका छन ।
त्यो सबै अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकहरूले नै ब्यबस्थित गरेका छन । सिके रावत न त असली मधेसी जनताको पक्षमा छन । न त उनी कुनै नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा छन । यदि कसैले त्यो बुझछ भने त्यो सब भ्रम मात्र हो । भन्नेकुरा सिके रावत र उनले निर्माण गरेका युद्ध सामाग्री पृथकताबादी सैनिक तालिमले प्रष्ट पारेको छ । खासगरी अमेरिकी सिआइएको गुप्तचर बैधानिक एजेन्ड सिके रावत हुन । दक्षिण एशियाली मुलुकलाई अलग अलग पारेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादका बफादार सिपाही सिके रावतलाई आकाश पातलको महत्त्व दिनु नेपाली राजनीतिमा दुर्भाग्यपूर्ण संकेत हो ।
उनले नेपाललाई टुक्राएर अलग मधेस राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना स्वबिबेक आएको होइन । यथार्थमा अमेरिकी साम्राज्यवादको अगन्य आर्थिक प्रलोभनमा सिके रावत र तिनका नजिक घुम्ने बिखण्डनकारी जतिलाई मनग्ये आर्थिक प्रलोभनमा पारिएको छ । मुख्यत यो ग्राइन डिजाइन अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुक मध्येबाट भएको छ । जुन पेरिफेरिको प्रतिनिधि पात्र सिके रावत भएका छन ।
उनले मधेसी जनताको मानव लासको दाउ हानेर पश्चिमाहरुको इच्छा चाहाना पुर्ती गर्ने सोचाइमा छ्न । यो हुन नदिनु सच्चा देशभक्त तथा स्वभिमानी नेपालीहरुको दायित्व हो । सिके रावतलाइ सबैभन्दा पहिले एउटा आइडोलोजिकल ब्यक्ती भन्नेकी देशद्रोही भन्ने केपि वलीले भन्नुभयो बिद्द्वान सिके रावतलाइ बैज्ञानिक देख्ने केपि वलिका अँखा मात्रै होइन केपि वलि आफैमा आन्तरिक बिखण्डनको मुद्दामा समाहित भएको पुस्टाई हुन्छ ।
सिके रावतले भनेका बिगतमा नेपाल राष्ट्रलाई गरेको तथानाम गाली गलौजले अहिले भोलि जहिलेपनी उनी नेपाली राजनीतिको मुलधारमा आउने ब्यक्ती होइनन् । र आउदैनन भ्रमित नहुन जरुरी छ। बर्तमान सरकारले अबिभाज्य राष्टलाइ बिभाजन गर्न सकिने लोकतान्त्रिक विधि मान्यतामा सम्झौतामा गर्नु भनेको उग्रवादी बिखन्डनलाइ कानुनी र सरलीकरण ब्याख्या गरेको हो ।
केपि वलिको नक्कली राष्ट्रवाद र बिखन्डनको सुरुवात ।
नेपाली इतिहासमा राष्ट्रबादको इमोसनल र अप ब्याख्या गरेर क्षणिक आतमरत्तिको जनमत बटुलेका तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा वलिको कथित राष्ट्रियता राष्ट्र भन्दा भिन्नै उग्रवादी चिन्तनको राष्ट्रवाद हो । जस्ले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्नेकाम गरेको सुरुमै स्पष्ट छ । बर्तमान अबस्थामा मधेसबादी राजनीति दल र तिनका समर्थकलाई होच्याउने र तुच्छ व्यंग्य कटाक्षले नेपाली राष्ट्रिय भाबनालाई कमजोर बनाउने काम नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक केपि वलिबाट सुरुवात भएको हो ।
मधेसी जनसमुदायलाइ नेपाली होइनन् भन्ने प्रकारको छुद्र कटाक्षले पनि काम नगरेपछी यतिबेला असली मधेसबासी राजनीति दलमाथी अन्याय गरेरमात्र बिखन्डनकारी देशद्रोहिलाइ सहयोग गर्ने बाटोमा केपि ओलि लागेका छन । जसको प्रतिनिधि पात्र केपि वलि प्रचण्ड र राम बहादुर थापा बादल समेतको गैर अराजनीतिक भुमिका रहन थालेको छ । केपि वलि न हिजो राष्ट्रबादी थिए न त आज छन न त भोलि हुनेनै छन अमेरिकी बिखन्डनकारी बिरुवामा मलजल हाल्ने काममा लागेका छन यसैगरी बुझ्न जरुरी छ।
नेपाल सरकार र सिकेको अन्तिम चाल
२००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख मुद्दानै इतिहासमा नेपाल र नेपाली जनताको हित बिपरित भएका राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वतन्त्रता र सुसासन नै थियो । त्यहीँ मुद्दाहरूको हैती भजार्इले बर्तमान परिपेक्षमा कथित नेकपा नामको सरकारले जनताको मन जितेर सत्तालाई हातपार्न सफल भएको हो ।
बर्तमान सरकार आर्थिक राजनीति तथा सामाजिक सास्कृतिक बिकास शिक्षा स्वास्थ रोजगार सबै मुद्दामा असफल साबित भएको छ । यहीँ असफलताको कारण अर्धचेत अबस्थामा चलमलाएको यो सरकारलाई पुन अमेरिकी दबाबमा पारेर सिके रावतसँग एउटा सम्झौताको प्रपण्च रचिएको छ । यो खेल खासगरी नेपाललाई बैधानिक मार्गबाट भएरै सक्ने र युद्धको थलो बनाउने खेल खेलिएको छ ।
मुख्यगरी नेपाल सरकारसँग बिखण्डनकारिले आत्मसमर्पण गर्छ की सम्झौता नेपाल राष्ट्रको बारेमा ? प्रश्न बाचक औंला तेर्साउने बिखन्डनकारी पृथक्ताबादिहरुले सरकारसँग आत्मसमर्पण गर्नुको साटो सरकारलाई झुकाएर जेलबाट निक्लेको एक प्रहर बित्न नपाउदै सिके रावत राष्ट्रियस्तरको दार्शनिक बौद्धिकको दर्जामा उक्लिनु भनेको सरकारपनि पुर्नरुपमा अमेरिकी तथा युरोपेली खेतालो बनेको स्पष्टतासँग देखिन्छ । राष्ट्रियता अखण्ड नेपाल र स्वाभिमानको मुद्दामा सिके रावत तथा केपि वलि एउटा सिक्काको दुइटा पाटा हुन केपि ओलिको उग्रवादी चिन्तन र सिके रावतले अङ्गालेको उग्र बिखण्डन सारमा एउटै बिन्दुमा मिसिनु स्वभाबिक थियो ।
त्यसैको प्रतिफल नेपाल सरकार र गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री सहितको संलग्नतामा यो परिघटनाहुनु केपि वलिको चिन्तनगत खराबी महाकाली सन्धी एसिया प्यासिफिक पिस फेड्रेसनमा भएको साँकृतिक बिचलन जिससकी छोरीलाई खुट्टामा सिर न्युराउनु आदि आदी छन । नेपाली जनताको लागि कुनैपनी बिखण्डनकारी तत्वलार्इ बिनासर्त लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा आयो भनेर खोक्रो राष्ट्रवाद फलाक्नु हिटलर मानसिकताको उपज हो ।
सिके रावत अन्ततोगत्वा राष्ट्रलाई बिखण्डन गरेर नेपाललाई र नेपालको नक्शा परिवर्तन गर्न चहान्छन । सिकेलाइ पनी अमेरिकी दबाब मूलक संदेश परिरहेको सिके रावतले बोकेका बिखण्डन तथा पृथक्ताबादी एजेन्डा कथित सत्तासीन नेकपा र केपि प्रचण्डलाई घाँटिमा हड्डी बनेर अड्किने पक्का भएको छ । भने सिके रावत अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएको आर्थिक हिनामिना प्रयोगमा परेर उनिपनी बाधिएका छ्न ।
अर्कोतिर बर्तमान एमाले तथा माकेको एकता चुनावी गठबन्धन सबै पश्चिमा मुलुकहरूको गुरु योजनामा भएको हो । त्यसैको प्रतिफल सिके रावतसँगको सम्झौता हो । यो पश्चिमाहरुको दबाबमा केपि प्रचण्ड समेतको तै चुप मै चुपको अवस्था छ । यो सबैलाई अध्यन गर्ने हो भने बर्तमान सरकारलाई उपयोग गरेर राष्ट्रलाई टुक्राउने खेलमा पश्चिमा सफल भएका छन । यो सम्झौताले सम्पूर्ण नेपालीहरुको स्वाभिमानी शिर झुकेको छ।
केपि प्रचण्ड र सिके रावतले पहिलो निसानामा जो नेपाली भएर वास्तविक नेपाली राजनीति गर्न चहान्छन । तिनै राजनीति दलमाथी हुने कुरा निश्चित छ । कानुनलाइ समेत हातमा लिएर अमेरिकी इसरामा देशद्रोही तथा बिखण्डनकारी अराजनीतिक चिन्तनलाई स्थापित गराउने र जो नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतामा आधारित रहेर राजनीति गर्न खोज्दैछन राजपा मजफो लगायतका नेपाल र नेपालीको बिकास उन्नति प्रगति चहाने मधेसीको पक्षमा उभिएका सबैलाइ डिस्टोय गर्न चहाने अमेरिकी चालबाजिको चङ्गुलमा नाच्नेकामको सुरुवात भएको छ ।
प्रचण्ड केपि र सिकेको थालेको बाटो के हो ?
केपि वलि प्रचण्ड र सिके रावतको पहिलो योजना नेपालमा कसरी अमेरिकी चाख परिपुर्ति गर्न सकिन्छ । भन्ननै छ । पहिलो निशानामा मधेसमा वास्तविक राजनीति गरिरहेका नेपाली राजनीतिको मुलधारमा रहेका मधेबादी राजनीति दलमाथी सुरु हुनेछ । जस्को कारण नेपाली हुँदाहुदै सिके रावतको कित्तामा उभिन बाध्य पारिने चाल चालिएको छ ।
दोस्रो निसानामा वास्तविक कम्युनिस्ट राजनीति गर्नकै लागी राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजिबिकाको सवालमा आफ्नो सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिमा लागेको नेकपा जसको नेर्तत्व बिप्लवले गरेका छन । सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समेतलाई प्रयोगमा ल्याउने जेल हत्या हिंसा सबै प्रयोग गर्ने छन ।
तेस्रो निसानामा नेपाली सेनालाइ समेत चौतर्फी रूपमा कमजोर पारेर सिके रावतको पृथक्ताबादी चिन्तन सोचलाई जायज हो भन्ने पार्न केपि प्रचण्ड र सिके रावतको अन्तिम योजना छ । यो योजना यी तिनको नभएर अमेरिकी बिखन्डनकारी योजनाको प्रारम्भ हो ।
राष्ट्रियता,प्रजातन्त्र र जनजिबिकाको मुद्दामा बाहेक त्यो भन्दा बाहिर कुनैनकुनै अनर्थ लाग्ने दस्तावेज निर्माण हुन्छ भने त्यो कुनैपनी देशभक्ति जनताको लागि मान्य हुन सक्दैन । त्यसैले बर्तमान सत्तासीन पार्टी र त्यसको नेर्ततवमा बनेको सरकारले देशद्रोहीको मुद्दाको वकालत गर्दै आएको सिके रावत समुहसँग भएको सम्झौताले नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय अखण्डता र सुसासनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ । जसको पछाडी नेपाली जनताको स्वाभिमानको लडाइँमा लासको खेतिगर्न प्रचण्ड केपि वलि सरकार र सिके रावतले थालेको बाटोले स्पष्ट देखाएको छ । कुनैपनी पृथक्ताबादी समुदायको ब्यक्तिलाइ छेतपिुर्ती दिने भनियो ।
सम्झौताको बुदा दुई र चार अत्यन्तै खेदप्रकट आपत्ति जनक छ
अझै अर्को खतरापूर्ण कुरा त स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भनेर भनिएको छ । स्वतन्त्र मधेस भन्ने शब्द न त हिजो थियो न त आज हुन्छ न त भोली नै । यो शब्दको कोड गर्ने हो भने पिके र सिकेले कथित स्वतन्त्र मधेस रहेछ र छ भन्ने कुराको गलत संदेश नेपाली जनतामा र मधेशका राष्ट्रभक्ती जनता समक्ष फैलाउन खोजेका छ्न ।
अर्कोतिर देशद्रोहिको मुद्दा लागेका पृथक्ताबादी समुहका कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र पुर्बक आफ्नो गतिविधिमा लाग्न पाउने भनेपछि राष्ट्रघात तथा बिखण्डनकारिलाई थप हौसला र प्रसय दिएको जसले के कुरासँग सहयोग गर्छ भने सरकार र सरकारमा रहेको राजनीति दल समेतको त्यसप्रति समलगनता छ भन्ने बुझाउने गर्दछ।
सबैभन्दा खतरापूर्ण र आपत्ती जनक कुरा त सिके रावतले बोकेका बिखण्डनकारी एजेन्डालाई जाली र कपटपूर्ण तरिकाले भनिएको छ । जनमतको आधारमा लोकतान्त्रिक विधि प्रकृयाको माध्यमबाट हल गरिनेछ भनिएको छ । वास्तविक कुरा कसरी बुझ्न जरुरी छ ।
भने पृथक्ताबादी देशद्रोहीलाई कुनैपनी देशमा स्वतन्त्र काम कारबाही गर्न समेत अधिकार दिनु हुँदैन भने सिके रावतले ल्याएको बिखन्डनकारी मुदालार्इ जनमत भनियो अझ सिके रावतले जनमतसंग्रह भनिसके यो अबस्थामा नेपाल सरकार त्यो सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति दल सिदासिदा बिखन्डनकारी राष्ट्रिय अप्रादिक मानसिकताबाट ग्रसित छन भन्ने पुष्टि गरेको छ । सिके रावतले सम्झौता पत्रको मसि सुक्न नपाउदै स्वतन्त्र मधेसकोलागी जनमतसंग्रह सरकारले सुइकार गरेको हो ।
भनेर दिप प्रज्वलन र विजयोल्लास मनाउने गरेको देखिन्छ । सरकारले सिके रावतको सुरक्षा गर्नकै लागि देशभक्त शक्ति माथी तुच्छ क्रोध भाषण दिएको देखिन्छ । यो अबस्थामा सम्पुर्ण राजनीति दल देशभक्त जनतन्त्रिक शक्ति एक ठाँउमा उभिएर कथित नेकपाको कठपुतली सरकार पृथक्ताबादी देशद्रोहिका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी कस्न जरुरी छ ।
बर्तमान सरकार र त्यसको सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति दल सत्तामा बसिरहेको खण्डमा अनिवार्य देश टुक्राटुक्रा बन्ने खतरापूर्ण संकेत देखिएको छ । केपि प्रचण्डको पार्टिलाइ सत्ता संचालनबाट हटाउने मात्रै होईन प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहेपनी देशद्रोहिलाइ प्रसय मिल्नेछ । जस्कोलागी राष्ट्र भक्ती तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिको एकता जरुरी बनेको छ।